PUBG Mobile Version က သင်ထင်ထားတာထက် လွယ်နေသလား ?
22 Mar 2018 . 6:36 PM
PUBG (Player Unknow Battlegrounds) ကို PC Version မှာ Paid Version အဖြစ်ဝယ်ယူကစားရပေမယ့် Mobile Version မှာတော့ Android ရော iOS မှာပါ အခမဲ့ Download ရယူဆော့ကစားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ PUBG ကို PC Version မှာကတည်းက ဆော့ကစားခဲ့သူတွေရှိသလို Mobile Version ထွက်မှ ဆော့ကစားလာသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ Mobile Version မှာဆော့ကစားသူတွေဟာ Winner ဒါမှမဟုတ် Top 10 စာရင်းထဲမှာ အမြဲတမ်းနီးပါး ပါနေတာပါ။ အမှန်တော့ PUBG ဟာထင်သလောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Mobile Version မှာတော့ အတော်လေးကိုလွယ်ကူနေတာဟာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းနေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ PUBG Mobile Version ဟာ PvP (Player Vs Player) ဆိုတာထက် PvB (Player Vs Bot) လို့ပြောရမယ့်အဆင့်ကိုရောက်နေပါတယ်။ Player တွေနည်းနေသေးတဲ့အတွက် ပွဲတွေမှာ Match ဖြစ်အောင် Bot တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားရပါတယ်။ ဒါဟာ PUGB ကိုပထမဦးဆုံးဆော့ကစားတဲ့သူတွေအတွက် ပွဲစပြီးခဏလေးနဲ့သေသွားရင် စိတ်ဓာတ်ကျပြီးဆက်မဆော့တော့မှာဆိုးလို့ လုပ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဆိုပါ Bot တွေဟာ သင့်ကို ခုခံတိုက်ခိုက်မှာတောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Player ရဲ့ Level မြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ တကယ့် Real Player တွေပါဝင်နှုန်းပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် PUGB မှာဆော့တဲ့အစပိုင်းပွဲတွေမှာနိုင်နေရင် သိပ်မပျော်နေပါနဲ့ နောက်ပိုင်းပွဲဆက်တွေမှာ ၃ မိနစ်တစ်ပွဲမဖြစ်အောင်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Phone Hay Ko (Akhayar)
PUBG Mobile Version က သငျထငျထားတာထကျ လှယျနသေလား ?
PUBG (Player Unknow Battlegrounds) ကို PC Version မှာ Paid Version အဖွဈဝယျယူကစားရပမေယျ့ Mobile Version မှာတော့ Android ရော iOS မှာပါ အခမဲ့ Download ရယူဆော့ကစားနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ PUBG ကို PC Version မှာကတညျးက ဆော့ကစားခဲ့သူတှရှေိသလို Mobile Version ထှကျမှ ဆော့ကစားလာသူတှလေညျးရှိနပေါတယျ။
ထူးခွားခကျြတဈခုအနနေဲ့ Mobile Version မှာဆော့ကစားသူတှဟော Winner ဒါမှမဟုတျ Top 10 စာရငျးထဲမှာ အမွဲတမျးနီးပါး ပါနတောပါ။ အမှနျတော့ PUBG ဟာထငျသလောကျ မလှယျကူပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Mobile Version မှာတော့ အတျောလေးကိုလှယျကူနတောဟာ နညျးနညျးတော့ ထူးဆနျးနပေါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ PUBG Mobile Version ဟာ PvP (Player Vs Player) ဆိုတာထကျ PvB (Player Vs Bot) လို့ပွောရမယျ့အဆငျ့ကိုရောကျနပေါတယျ။ Player တှနေညျးနသေေးတဲ့အတှကျ ပှဲတှမှော Match ဖွဈအောငျ Bot တှကေို ထညျ့သှငျးပေးထားရပါတယျ။ ဒါဟာ PUGB ကိုပထမဦးဆုံးဆော့ကစားတဲ့သူတှအေတှကျ ပှဲစပွီးခဏလေးနဲ့သသှေားရငျ စိတျဓာတျကပြွီးဆကျမဆော့တော့မှာဆိုးလို့ လုပျပေးထားတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့။ အဆိုပါ Bot တှဟော သငျ့ကို ခုခံတိုကျခိုကျမှာတောငျမဟုတျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ နောကျပိုငျး Player ရဲ့ Level မွငျ့လာတဲ့အခါမှာတော့ တကယျ့ Real Player တှပေါဝငျနှုနျးပိုမြားလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ PUGB မှာဆော့တဲ့အစပိုငျးပှဲတှမှောနိုငျနရေငျ သိပျမပြျောနပေါနဲ့ နောကျပိုငျးပှဲဆကျတှမှော ၃ မိနဈတဈပှဲမဖွဈအောငျလညျး ကွိုတငျပွငျဆငျထားဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။